စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - Element ကို Society က
ကြှနျုပျတို့၏ website အသုံးပြုခြင်း
သူတို့ကဒီ website ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအုပ်ချုပ်အဖြစ်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ ဒီ site ၏သင့်အသုံးပြုမှုဆိုက်ရန်သင့်ပထမဆုံးခရီးစဉ်၏နေ့စွဲကနေအကျိုးသက်ရောက်ယူသောဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏လက်ခံမှုရှိပါသည်။ ဤအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပြည့်အဝလက်ခံကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းဒီ site ၏အသုံးပြုမှုအဆုံးသတ်ခြင်းပေးပါ။ သင်သာအပျသညျဟုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီ site ကိုသုံးစွဲဖို့သဘောတူခြင်း, မည်သည့်တတိယပါတီများ၏အခွင့်အရေးချိုးဖောက်, မဒီ site ၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ခံစားကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်တားစီးမထားဘူးတဲ့ထုံးစံ၌။
ဒီ website နှင့်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်အမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာဖြစ်စေသမျှမည်သည့်မျိုးမပါအာမခံနှင့်အတူအခြေခံ '' ဖြစ်သကဲ့သို့ '' တစ်ဦးအပေါ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဒီ website နှင့်ပေါ်မှာအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုအသုံးပြုသူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအန္တရာယ်မှာလုံးဝဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်အတွက် Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကသို့မဟုတ်ဤ website ကိုမှဆက်စပ်ပေါ်ထွက်လာသောသမျှမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဒီ website နှင့် / သို့မဟုတ်ပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမကျေနပ်မှုအဘို့သင့်ဝါးနှင့်သီးသန့်ဆေးတစ်လက် is ဆိုက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်ရန်။
ဒြပ်စင် Society ကဒီ site ထဲမှာပါရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို uninterrupted သို့မဟုတ်ပါလိမ့်မည်အကြောင်းခိုင်လုံပါဘူး အမှားအခမဲ့, ဒါမှမဟုတ်ချွတ်ယွင်းတညျ့မည်။
virus ကာကွယ်မှု, ဟက်ကာနှင့်အခြားပြစ်မှုများ
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာစစျဆေးနှင့်စမ်းသပ်ပစ္စည်းမှတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြစ်စေလျက်, သို့သော် သင်ကဤ website ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင် employ ရသောလုပ်ငန်းစဉ်ဗိုင်းရပ်စ်များ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာကုဒ်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ system ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါအရာရောက်စွက်ဖက်၏အခြားပုံစံများများ၏အန္တရာယ်မှသင်တို့ကိုမြင်အောင်မပြထားဘူးကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူရမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ဆိုဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မဆိုတာဝန်ယူမှုလကျမခံနိုငျသညျ, ဒီ website.You ကနေဆင်းသက်လာပစ္စည်းသုံးပြီးနေတုန်းဖြစ်ပေါ်ရသောသင့်ဒေတာသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်နှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသိလျက်ဗိုင်းရပ်စ်, trojans နဲ့, worm, ယုတ္တိဗေဒဗုံးသို့မဟုတ်မိတ်ဆက်ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏ site အလွဲသုံးစားမပြုရ အန္တရာယ်ရှိတဲ့သို့မဟုတ်နည်းပညာအန္တရာယ်ရှိသောအရာသည်အခြားပစ္စည်း။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site သိမ်းဆည်းထားသောအပေါ်ဆာဗာသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆာဗာကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စကျွန်ုပ်တို့၏ site မှချိတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားမပြုရပါ။ သင်တစ်ဦး denial-of-service ကိုတိုက်ခိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေ denial-of-service ကိုတိုက်ခိုက်နေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ရပါမည်။
ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်ဖြင့်, သင်သည် Computer ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းအက်ဥပဒေ 1990 အောက်မှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအာဏာပိုင်များထံမဆိုဤကဲ့သို့သောဖောက်ဖျက်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့သူတို့ကိုသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့အားအာဏာပိုင်များနှင့်အတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒသတ်မှတ်ထားသောရှိသူများထက်အခြားမည်သူမဆိုဖို့ပေါ်တွင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးအသေးစိတ်ရှောက်သွားဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့နေ့စွဲဖို့ Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ထားရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါစေနေချိန်မှာကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်အချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှအဖြစ်မဆိုအာမခံချက်များ, အခြေအနေများသို့မဟုတ်အာမခံမပေးပါဘူး။ ကျနော်တို့တရားမျှတမှုမရှိခြင်း, စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှိမရှိ, တိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ, ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများမြှုတ်အရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုလကျမခံပါဘူး။
ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ဝင်ငွေ, စီးပွားရေး, အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်. သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. မျှော်မှန်းငွေစု, ဒေတာချစ်ကြည်ရေး, မြင်သာထင်သာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဖြုန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ရုံးအချိန်, သုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, သို့မဟုတ်၏ရလဒ်များကို: ဒီဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အသုံးပြုမှုကိုပြုလုပ်ကြောင့်အပေါ် posted ဆိုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ။ ဤအခြေအနေမှဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်သင့်မြင်သာထင်သာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အထက်ထွက်သတ်မှတ်အမျိုးအစားမဆိုအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အခြားမည်သည့်တောင်းဆိုချက်များမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုတားဆီးမရကြလိမ့်မည်။
ဤအသေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ဆမှု, မလိမ်လည်မှားယွင်းစွာတင်ပြသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာတင်ပြမယ့်အခြေခံအကျဆုံးကိစ္စအဖြစ်, မသက်ဆိုင်သောဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်မရနိုငျသောအခြားမည်သည့်တာဝန်ယူမှုဘို့ငါတို့တာဝန်ယူမှုကိုမှပေါ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာဘို့ငါတို့တာဝန်ယူမှုကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ဤစာမျက်နှာများပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များသို့လင့်ထားသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များအားပေး, သင် elementsociety.co.uk လင့်ထားသည်မှခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်မလိုပါ
သို့သျောကြှနျုပျတို့သင်သည်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းသို့မဟုတ် Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းများကထောက်ခံကြောင်းအကြံပြုဖို့ခွင့်ပြုချက်မပေးပါဘူး။
ဒြပ်စင်လူ့အဖွဲ့အစည်းမဆိုတာဝန်ယူမှုကိုလကျမခံပါဘူး ကျော်လွန် ဤတတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကို။ ဤအလင့်များ၏တည်ရှိမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ထောက်ခံချက်, မသူတို့ကိုဖော်ပြအမြင်များဖွဲ့စည်းမထားဘူး။ ဤဆိုဒ်များဖို့ Link အသစ်လုံးဝသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒြပ်စင် Society ကမည်သည့်အချိန်တွင်မကဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပြင်ဆင်စေခြင်းငှါ, သင်တို့ကိုအခါအားလျော်စွာသူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သဘောတူသည်။ အဆိုပါတည်းဖြတ်မူကိုသင်လက်မခံနိုင်ဖြစ်သင့်, သငျသညျခကျြခငျြးဒီ site အားဝင်ရောက်ရပ်တန့်ရန်သဘောတူသည်။
သတင်းအချက်အလက်, ပုံများ, အမှတ်တံဆိပ်, ဓါတ်ပုံများနှင့် site ၏အလုံးစုံပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ကူးယူစေခြင်းငှါ, ချိ, ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မှလွဲ. မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သူများကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသမျှမည်သည့်ပုံစံကိုပြောရင်အပါအဝင်ဤ website ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသမျှ, သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း။
ဤအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆိုဤသတ်မှတ်ချက်များထိရောက်သောဖြစ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်မဆိုပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံ၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်, ထို့နောက်အတိုင်းအတာနှင့် Term တရားမဝင်မမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ကြောင်းအရာအတွင်းတရားမဝင်မမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မပြုနိုင်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခံရကြလိမ့်မည်ဆိုပါက ဒါကြောင့်ပြတ်နဲ့ဖျက်ပစ်သောဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောသတ်မှတ်ချက်များကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရကြလိမ့်မည်, အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်စည်းနှောင်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုဖြစ်ဆက်လက်ဖြစ်လိမ့်မည်။